बसमा सवार यात्रुको कसरी भयो मृत्यु ? - Paschimnepal.com
बसमा सवार यात्रुको कसरी भयो मृत्यु ?
सुर्खेत । बसमा सवार एक यात्रुको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । काठमाडौंबाट जाजरकोट जाँदै गरेको ना ४ ख ८१२० नम्बरको बसमा सवार रुकुम आठविसकोट–३ का ४० वर्षिय नरेन्द्र बोहोराको सोमबार मृत्यु भएको हो ।
जाजरकोट जाँदै गरेको बसमा बोहोरा गुर्भाकोटको एक होटलमा रहेको शौचालय गएका थिए । तर बसको सिटमा बसे लगत्तै उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । घटना लगत्तै अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले बोहोरा लामो समयदेखि बिरामी रहेको र उनको कालगतिले मृत्यु भएको खुलेको छ ।
बोहोरालाई लामो समयदेखी उपचार गर्दा पनि सुधार नभएको र घर फिर्ता जानेक्रममा उनको मृत्यु भएको आफन्तले बताएको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसधानले पुष्टी गरको छ । मृतक बोहोरको शव आफन्तले बुझेर लगेपनि थप अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ ४, २०७५ 6:09:48 PM
Prevबजाजको म्याक्सीमा–सी असिम अटाे पार्टसले सुर्खेत भित्रायाे, मुल्यसहित
Nextसिडियो र एसपीलाई जनप्रतिनिधिले भने, ‘प्रदेश राजधानी लागु औषध हव बन्यो दुर्व्यसनी मात्रै पक्राउ हैन जरो नि उखलौं’